Soo dejisan AOMEI Backupper 5.5 Standard... – Vessoft
WindowsNidaamkaSoo celinta iyo soo celintaAOMEI Backupper
Bogga rasmiga ah: AOMEI Backupper
AOMEI Backupper – software ah ilaa dib u soo celinta iyo xogta. software The dib kartaa ilaa disk ama maqaal qoruhu shaqsi iyo nidaamka ka hawlgala la codsiyada lagu rakibay, dhammaan faylasha iyo goobaha nidaamka. AOMEI Backupper kuu ogolaanayaa inaad Gadzhiyev disk ah, eegista celin xogta loo baahan yahay iyo in la abuuro disk ah Downlaods ama flash. software waa Buur image soo xulay qaab disk dalwaddii awoodaan. AOMEI Backupper taageertaa gurmad ah oo ka mid ah cajaladaha gudaha, drives adag dibadda, drives flash iyo qalab kale oo lagu kaydiyo xogta ku xiran kombiyuutarka.
Kaabta ee nidaamka qalliinka iyo cajaladaha
Recovery of nidaamka, cajaladaha iyo files xulay
Abuur ah cajaladaha Downlaods
Sirta iyo riixo ee gurmad ah
Soo dejisan AOMEI Backupper
Dib-u-soo-celinta AOMEI OneKey – barnaamij loogu talagalay in lagu kabo oo dib loogu soo celiyo nidaamkii dhowr dhagsii iyada oo aan la adeegsanayn warbaahinta bootable ah.
Faallo ku saabsan AOMEI Backupper
AOMEI Backupper Xirfadaha la xiriira